Dhaxal sugaha Sacuudiga oo lagu cadadinayo dilka wariyaha iney dowladdiisu qirato | Berberanews.com
Home WARARKA Dhaxal sugaha Sacuudiga oo lagu cadadinayo dilka wariyaha iney dowladdiisu qirato
Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay inay aaminsan yihiin dilka Wariye Jamal Khashoggi inuu ka dambeeyey General Ahmed al-Assiri dowladda Sacuudigana ay la gudboon tahay iney qirato dilka Khashoggi.
Madaxda ugu sarreysa dalka Mareykanka ayaa cadaadis xooggan ku haya Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Amir Maxammed bin-Salman inuu generaal ay aad isugu dhaw yihiin isla-markaana ah ku xigeenka laanta Sirdoonka Sacuudiga inuu dusha ka saaro dilka Jamal Khashoggi.
Maamulka Trump wuxuu sheegay inuu doonayo Washington iyo Riyadh iney iskala shaqeeyaan xiisadda cakiran ee cirka isku sii shareereysay ee ka dhalatay dilka wariye Khashoggi loo geystay.
General Axmed al-Assiri wuxuu ka mid yahay saraakiisha sirdoonka uu aadka ugu kalsoon yahay Amiirka dhaxal sugaha, boqortooyada Sacuudi Carabiya Amir Maxammed bin-Salman, ninkani oo soo ahaa sargaal sare oo ciidamada cirka mudda sanad ka badan wuxuu sirdoon ahaan uu uga soo shaqeeyey Dagaalka Yemen ka socda oo ay wadaan xulafada uu Sacuudigu horkacayo.
Dilka iyo waayitaanka Khashoggi oo ay mas’uuliyaddeeda Boqortooyada dusha ka saaran tahay, waxaa la rumeysan yahay iney arrintan si qorsheysan loo fuliyey.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay waayitaanka Kashoggi la wayey iney u badan tahay inuu dhintay, saameynta ka dhalan karta dilkiisana ay tahay “mid halis ah”.
Saraakiil ka tirsan dowladda Washington ayaa saddexdii maalmood ee la soo dhaafay soo jeedinayey xubnaha uga sarreeyey qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul inay arrintan ka dambeeyaan, Khashoggi-na qunsuliyadda dhexdeeda jirdil iyo dilba ay ugu geysteen xubno ka tirsan sirdoonka Boqortooyada Sacuudiga.
Diiditaanka uu ku adkeysanayo Amir Maxmed bin-Salmaan inuu Sacuudigu wax lug ah ku laheen wariyaha la waayey arrintiisa ay Sacuudiga u keeni karto cadaadis siyaasadeed oo sameyn badan yeelata oo uga timadda Maamulka Trump iyo Beesha Caalamkaba.
Waxayna sarkaaiisha Mareykanka ay carrabka ku dhufteen inuu dilka ninkaasi ka dambeeyo General Assiri, aanna loo baahneen inuu Sacuudigu diidmada uu ku sii adkeysto.
Mareykankana wuxuu maalinti Isniinta ahayd warmurtiyeed ka soo baxay ay aqlka cad uu ku sheegtay haddii ay ku caddaato Sacuudigu inuu dilka Khashoggi uu ka dambeeyey uu Mareykanka uu ka noqon doono heshiisyada hubka iyo ganacsiga oo horay uu ula galay Boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Previous articleItoobiya oo sii daysya maxaabiis badan
Next articleGodkuu Cabdi Daggey, Garanwaa Coomay